ကဲ ဒါကို သင်သိရဲ့လား | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Myanma News » ကဲ ဒါကို သင်သိရဲ့လား
Posted by ဦး ဂျစ် on Jul 23, 2012 in Myanma News, News | 22 comments
ဒို့များရွာသဂျီး မလာခင် အသာပြေးမှ …
နို့မို့ဆို လာပြန်ဦးတော့မယ်… လန်ကြုတ်ကြီး…ဆိုပြီး…
ခုမှ သတိရတယ်… နောက်ထပ် ကွိုင်တခုရှိနေသေးတယ်…
ရွာသူားတို့ရေ .. အနော်က ကူးတင်တာပါနော်… မရွှေအိမ်စည် စာကြည့်တိုက်ထဲကပါ…
အနော်လဲ သေချာ မသိပါဘူး..
လွတ်လပ်စွာ ကွဲလွဲနိုင်ကြပါကြောင်း …။
ငါ့နှယ်နော် သဂျီးရယ် ၊ ကိုအောင်ဘု ရယ် တို့ကို
ဘာ့ကြောင့်များ လန့်နေရပါလိမ့် …။
လာထုမယ် မထုဘူးတော့ မသိပါဘူး ..
ခု လောလောဆယ်တော့ .
သဂျီးတစ်ယောက် ရွာထဲကို မလှည့်နိုင်သေးဘူး ..
အိပ်ယာထဲ ဘုန်းဘုန်းလဲနေလို့ ဆိုပဲ ..
အခုမှ သိရတာဘဲ ဂျစ်ကြီးရေ
မသိသေးတာကို သိအောင် ရှဲပေးလို့ 
ပြေးနဲ့ မိပြီ ။။ ဟားဟား ချော်လဲပြီ .. ပြေးပါနဲ့ဆိုထွက်ပြေးတယ် … ခုတော့ ထနိုင်တော့ဘူးမလား ငှဲငှဲငှဲ .. ။
ုဟုတ်တာပဲ မပြေးပါနှင့်ဆို ဇွတ်ထွက်ပြေးတာကိုး
ကောင်းပါလေ့ကောင်းပါလေ့
ဗုဒ္ဓဘာသာအနှစ်ချုပ်က သဘာဝတရားကိုအခြေခံထားတဲ့ ဘာသာပါ
သဘာဝတရားကိုလွန်ဆန်ပြီး … လို့ပြင်ဖတ်ပေစေလိုပါတယ်။။။
အမျိုးဘာသာ သာသနာကျိုး များစွာတိုးပြု မြတ်ကောင်းမှု ရှေ့ရှုဆောင်ရွက်ကြပါ ။
လူသားချင်းချင်း ချစ်ခင်ခြင်းနှင့် ပေါင်းသင်းဆက်ဆံ မေတ္တာမှန် ပြန်လှန်ထားရှိကြပါ ၊
ဒီ ၂ ချက်နဲ့တင် ဗုဒ္ဓဘာသာကြီးဟာ ထိပ်တန်းရောက်သွားတော့မှာပါ ။
ငြိမ်းချမ်းသော ဗုဒ္ဓ၏တရားရိပ်အောက်တွင် တရားကိုသိ၍၊တရား၏ညွှန်ပြမှု
သိပါသည်။ ဒါပေမဲ့ အခုလို မရဲတရဲလေး
အတုမရှိ အတူမရှိ အနှိုင်းမဲ့ မြတ်ဗုဒ`ဓ
ဒါက.. ဗုဒ္ဓဘာသာနဲ့ပါတ်သက်ပြီး.. အိုင်စတိုင်းပြောထားတာတွေ..
A human being is part of the whole, called by us “Universe”;apart limited in time and space. He experiences himself, his thoughts and feelings as something separated from the rest —akind of optical delusion of his consciousness. This delusion isakind of prison for us, restricting us to our personal desires and affection forafew persons nearest us. Our task must be to free ourselves from this prison by widening our circle of compassion to embrace all living creatures and the whole nature in its beauty. Nobody is able to achieve this completely but striving for such achievement is, in itself,apart of the liberation andafoundation for inner security. Albert Einstein
Albert Einstein’s religious views have been studied due to his sometimes apparently ambiguous statements and writings on the subject. He believed in the god of Baruch Spinoza, but not inapersonal god,abelief he criticized. He also called himself an agnostic, and criticized atheism, preferring he said “an attitude of humility.”
တားတားဒို့ဂ အင်းဂလိပ်စာဆိုရင် အိုးနင်းခွက်နင်းနဲ့ ခနော်နီခနော်နဲ့ရယ်
အိုင်စတိုင်းက ဘာသာမဲ့ဆိုတာ သိတာတော့ကြာပါပြီ။
ဒါတ်(ခ်ျ) ဒသနဆရာ စပင်နိုဇာရဲ့ အတွေးအခေါ်တွေရှိတယ်ဆိုတာတော့မသိပါဘူး။
ကျေးဇူးပါသူကြီး။လူတိုင်းမှာ “an attitude of humility” ဆိုတာရှိရင် ဘာမှဝင်ပြောစရာမလိုပါ။
သူကြီးကို ဘာသာပြန်ပေးဖို့တောင်းဆိုရင် ဘယ်တော့မှ မပြန်ပေးဘူး .. ဆိုတော့ .. ဆရာမကြီးတို့ အရီးလတ်တို့ ကျွန်တော်တို့လို ကလေးတွေ နားလည်အောင် ဘာသာပြန်ပေးပါလို့ မေတ္တာရပ်ခံပါရစေ..
အဟီး …အားဘူးကွလို့ သူကြီး မပြောမီ ကျွန်တော်လည်း ပြေးပြီ.. :grin:
သ၈ျီးက သများတို့ နားမလည်အောင် လုပ်ချလိုက်ပြန်ပါပြီ . . သေပြီပေါ့ .
အပေါ်စီးက အပိုင်ထုချလိုက်ပြန်ပြီထင်တာပါပဲ .
အိမ်း . .
ကိုရင်ဂျစ် ရည်ညွှန်းသလို အမြန်ဆုံးသာ ဖြစ်လာစေချင်သား . .
နို့မို့ဆို လောလောဆယ် နေရစားရ တယ်ကျပ်သကွယ့် . .
မိုက်လေး တို့တော့ ….
ဗုဒ္ဓဘာသာဟာ… လိုအပ်ချက် ဆိုတာတွေနဲ့…. ကင်းလွတ်နေတဲ့…
သဘာဝတရား ကိုထောက်ပြတဲ့ …. ပြီးပြည့်စုံတဲ့. ..တရားဖြစ်တယ်
ဆိုတာ … သိပ္ပံက၀ိတွေတောင် ..နိဗ္ဗာန်ကို မျှော်ကြည့်နေကြပြီခင်ဗျ….
ဝင်ရောက် အားပေးသူအပေါင်း ကျေးဇူးပါခင်ဗျ…..၊
ဗုဒ္ဓဘာသာ သာသနာကြီး အဓွန့်ရှည်တည်တန့် ခိုင်မြဲပါစေ ….၊